China CY-1 (Yakajairika yekunze kusunda-dhonza hembe hanger) vagadziri uye vanotengesa | Jialong
Rega iwe uswedere padyo nezuva!
Musanganiswa wezvinhu A00aluminium chiwanikwa Chigadzirwa chechigadzirwa Matanda maviri / matatu matanda / matanda mana
Kurema kwematanda maviri 0.45kg 0.56kg 0.84kg 1.12kg 1.4kg 1.0kg
(Kukora kweiyo chubhu kuri 0.8 mm)
mamirire:Wedzera nzvimbo yefurati, kuitira kuti mbatya dzako dzibvise mwenje wezuva kubva kumakona mazhinji, pese paunounganidza mbatya dzazara nezuva. Iyo yekushandisa modhi inogona kugadzirisa matambudziko ekutsvedza kwezuva kubuda, kusakwana kwezuva kubuda uye kupfupika kwezuva rekuratidzira nguva.
Kuisa chinzvimbo:Balcony yekunze masvingo, kusanganisira kuputira, anti-kuba windows, hollow brick, arc balcony, Stainless simbi kutuka, nezvimwewo Zvinoenderana nenzvimbo dzakasiyana dzekumisikidza, iyo nzira yekumisikidza inogona kugadziridzwa.
unaku hwechinhu:Iyo mbatya yekuomesa pole inogadzirwa nesimba rakasimba realuminium alloy. Iyo yepamusoro yakafukidzwa zvizere ne electrostatic pendi, iyo isina ruvara uye isina ngura. Dhizaini yakasimbiswa iri pakati inoita kuti mbatya dzekuomesa danda dziwedzere kusimba Nekuti isu tine yakasarudzika nzira yekurapa maitiro, haigone oxidize uye kupera mukati memakore matatu kusvika mashanu. Mazuva ese zvakare zvinongoda kushandisa machira kupukuta usati waomesa mbatya.
kugadzirwa:Maitiro ega ega anotariswa nemunhu akakosha, uye chikamu chega chega chinotora muyero wenyika kuona mhando yezvigadzirwa kusvika padanho rakakura, kuitira kuti vatengi vanzwe kugadzikana.
kurongedza:Tine rakakosha ruvara bhokisi rekurongedza, kuti tidzivise kurasikirwa kukuru mukufamba kwekufambisa. Ehe, isu tinogamuchirawo iwo maitiro eiyo ekunze kurongedza. Kana iwe uine chero zvakabatana zvinoenderana, unogona kutumira email kana kubvunza isu zvakananga.
senga:Tine yakakosha logistics kambani yekutengesa kunze kwenyika, hongu, kana zvichidikanwa, unogona kushandisa yekufambisa kambani yesarudzo yako.
muenzaniso:Mukana wevanoda vatengi, isu tinogona kupa mamwe masampula evatengi 'kunongedzera uye kusarudzwa.
kuyedza kwemhando:Kune zvigadzirwa zvine chekuita nemhando yekuongorora mishumo, kuitira kuti iwe ugone kuve nechokwadi nezve zvigadzirwa zvedu.
Mhinduro:Kune vatengi vasingazoise kana kuva nemamwe matambudziko, unogona kutumira email kubhokisi redu retsamba, kana kutifonera kuti tibvunze, uye isu tinopa mhinduro nekukurumidza sezvazvinogona.
Pashure: CY-2 (zvakajairika zvekunze kusunda-kudhonza hembe hanger)